Wargeyska New York Times Oo Warbixin Ka Qoray Xaaladda Xanuunka COVID 19 Ee Somaliland
Tuesday January 05, 2021 - 16:26:09 in News by A. Asbaro
Hargeisa(HWN):-Wargeyska New York Times oo sheegay in xannuunka Covid-19 uu Somaliland dadka ugu laynaayo si Aamusnaan ah.
Wargeysku wuxu sheegay in dadka Xannuunka laga hellaa aanay tagin Cusbitaallada, haseyeeshee ay marka danbe Guryahoodda ku Dhintaan.
Xaaladda Somaliland ee Xannuunka Coronavirus ayaa laga dayriyay,iyadoo aanay jirin Warbixino la xidhiidha xaaladda Xannuunka ee xilligan Somaliland iyo heerka uu maraayo.
"Qiyaas ahaan Boqolkiiba Sideetan Bukaannada laga helo Covid-19 ee Cusbitaalka guud ee Hargeysi u soo gudbiyo Daryeel Hospital nooma yimaadaan,guryahooda ayay ku dhintaan" Sidaa waxaa wargeyska New York Times u sheegay Dr.Yusuf Maxamed Axmed oo ka hawl-gala Daryeel Hospital.
Waxa uu intaasi raaciyay in Xannuunka Coronavirus dadka aamusnaan ku laayay, iyadoo ay Guryahoodda ku Dhimanayaan sida uu sheegay.
"Hadda Virus-ku dadka aamusnaan buu ku laynayaa”ayuu sheegay Dr. Yuusuf Maxamed Axmed oo la hadlaayay Wargeyska.
Wargeysku waxa kale oo uu hadal qaaday tacsida badan ee bogagga Baraha bulshada daadsan,taasi oo uu tilmaan uga dhigaayo tiro badnida geerida.
"COVID19 waxa uu la soo laabtay aar-gudasho” ayuu sheegay wargeyska oo soo xiganaya dad uu waraystay.